IMO-INU IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Imo-Inu Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
American Eskimo / Shiba Inu Yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
Shilo iyo Shiba Inu / Eskimo sanganisa rudzi rwembwa (Imo-Inu) pazera remakore matatu - muridzi wake anoti, Hunhu hwake ndihwo hweShiba. Iye anozviriritira zvakanyanya uye nehunhu. Ukamuudza kuti avate pasi, anomira kana iwe ukamuti agare PANO, anogara ipapo kana ukamuti auye pamubhedha, anoenda pasi. Anoda matoyi ake, kunyanya rake bhora rerabha rinosvota, uye achidhonza kuburitsa kunze kweZVOSE zvipfuyo zvakaomeswa. Iye akapfava nekamba kedu kemhuka, uye anoda kutamba nemwanasikana weshamwari yedu mushure mekunge amujairira, uye chinhu chaanofarira zvikuru kunanzva uye kunanzva uye kunanzva. '
Imo-Inu haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe American Eskimo uye iyo Shiba Inu . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
'Uyu mukomana wedu mudiki Jack pazera rimwe chete. Ndiye mambo weyadhi yake uye achavhima chero chinhu chinopinda, uye anomira akachengetedza kusvikira kutyisidzira kwaanoona kwaenda. Paaive pa leash papaki yemuno akamira, akatarisa pachigadziko chemiti, ndakatarisa ndikaona pasina chinhu. Masekondi maviri gare gare akasimuka, achibvarura leash kubva paruoko rwangu ndokudzingirira mhembwe dzino chena-muswe kwemayadhi zana kana kudarika. Haana kuvabata asi aive nebhora achivadzingirira. Ini zvino ndinoziva kutaridzika kana chiratidzo chake chekuzivisa saka ndakagadzirira izvi. Akave ane ruoko kune isu vaviri kubva pazuva rekutanga, asi nekumwe kuedza uye kudzidziswa ave imbwa huru uye isu tine rombo rakanaka kuva naye. '
Imo-Inu puppy - amai vayo iShiba Inu uye baba imbwa diki reAmerican Eskimo, mufananidzo neruremekedzo rwaD & D's Kennel
Eskinu puppy pamasvondo mashanu ekuberekwa, foto iratidzwe neD & D's Kennel
Eskinu puppy pamasvondo masere ekuberekwa- 'Iyi pup uye iyo iri pazasi zvese zviri zviviri kubva kumatara mamwe chete. Ivo vane hunhu hwakanaka kwazvo uye havafanire kukura kuva anopfuura mapaundi makumi maviri kana vanhu vakuru. Vese vedu vekare vatengi vakavada. Akanaka kwazvo dhizaini yekugadzira! ' Mufananidzo nerubatsiro rweD & D's Kennel
Shilo iyo Shiba Inu / Eskimo musanganiswa (Imo-Inu) pazera remakore matatu
Stryder iyo Imo-Inu (American Eskimo / Shiba Inu musanganiswa) sembwanana pamasvondo gumi ekuberekwa-Eskimo (amai) x Shiba (baba)
'Stryder aine makore maviri ekuberekwa - anofamba achipfuura nenyika mutiraki-semi zuva nezuva nesu. Ndiye shamwari yedu yepamwoyo, uye ane mweya wekutamba kwazvo. Anoda kutsvaga matoyi mumabhegi ekutenga pese patinodzoka kubva kuchitoro. Iye anotyisa sezvaanotarisa. '
Ona mimwe mienzaniso yeIcelandic Sheepdog
Chinyorwa cheAmerican Eskimo Imbwa Sanganisa Inobereka Imbwa
Chinyorwa cheShiba Inu Sanganisa Imbwa Dzembudzi
kutaura sei kana akc mapepa ari echokwadi
jack russell terrier uye dachshund musanganiswa
diki goridhe retriever yakazara yakura
dema uye chena boxer musanganiswa
labrador german Shorthaired pointer musanganiswa